कांग्रेसमा नेतृत्वको बहस: देउवा, पौडेल र सिटौलालाई बिदा गरेर युवालाई ल्याउनु पर्छ - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
कांग्रेसमा नेतृत्वको बहस: देउवा, पौडेल र सिटौलालाई बिदा गरेर युवालाई ल्याउनु पर्छ
२०७७ श्रावण १६, शुक्रबार ०९:१८:००
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आशन्न १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै नेतृत्वको बहस सुरु भएको छ ।
अहिले नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुलाई अभिभावक बनाएर नयाँलाई नेतृत्वमा पुर्‍याइ पार्टी हाक्ने जिम्मेबारी दिनु पर्ने आवाज युवापंतीबाट उठिरहेको छ ।
आवाज उठाउनेहरुले पुरानालाई पार्टीको नेतृत्व तहबाट आगामी फागुन ७–१० गते काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनबाट बिदाइ गर्न कार्यगत रणनीति बनाउने बेला आएको छ ।
अहिले जिल्ला जिल्लामा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रयोजनार्थ पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको काम चलिरहेको छ ।
क्रियाशील सदस्यताले नै कसलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने र कसलाई नेतृत्वबाट पछार्ने भन्ने निक्यौल गर्छ ।
अब इकाइ, क्षेत्र, महाधिवेशन, जिल्ला र प्रदेशका लागि पुरानालाई पञ्छाउने गरी प्रतिनिधि चयनमा नेताहरु जुट्नु पर्छ ।
यदी यो अवस्थामा त्यसरी सिलसिलेवार रुपमा काम गरिएन भने पुरानै नेता दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । किनकि पार्टी सत्ताको डाडू पन्यू उनीहरुको हातमा छ । तोड्न स्थानीय तहबाटै उनीहरुको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै जानुपर्छ ।
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले पटक–पटक आफ्ना रणनीति र कार्यनिति प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनीहरुको रणनीति र कार्यनीतिले कांग्रेस सशक्त र बलियो बन्न सकेन । २०६२-०६३को जनआन्दोदनको आशपासबाट पार्टी नेतृत्वमा रहेका उनीहरुको रणनीतिबाट चल्दा कांग्रेसको उधोगति सुरु भयो । पार्टीको त्यो उधोगति अहिलेसम्म जारी छ ।
र आगामी महाधिवेशनबाट पनि उनीहरु नेतृत्व तहमा आए भने पार्टीको पतनको बाटो कसैले रोक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।
तसर्थ यी नेताहरुलाई १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व तहमा प्रवेश निषेध गर्नेगरी ग्राउण्ड लेवलबाटै युवा नेताहरु एकगठ हुनुपर्छ ।
युवा नेताहरुले बुढा पुस्ताबाट पार्टी नेतृत्व युवा पुस्तामा झार्न गुट उपगुट त्याग्न आवश्यक छ ।
अब नेतृत्व तहमा देउवा, पौडेल र सिटौलासँगै नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विजयकुमार गच्छदारलगायतको काम छैन ।
उनीहरुलाई अभिभावक बनाएर युवा पिढीबाट पार्टी चलाउने गरि नेतृत्वमा चुनिनु पर्छ । यीनीहरुमात्रै होइन पदमा पुगेर आफ्नो कुनै प्रभाव छोड्न नसक्ने महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोठे राजनीति गर्ने पार्टी संगठनको ध्यान नदिने अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि अब कांग्रेसको नेतृत्व तहमा काम छैन ।
१४ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व तहमा पुग्न डा. शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाण, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, गगन थापा, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, डा. मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद, रमेश लेखक, गोविन्द भट्टराई, सहमहामन्त्री प्रकाससरण महतलगायतले गुट उपगुट नहेरेर गठजोड बनाउनु पर्छ ।
पहिला पुराना पुस्तालाई नेतृत्व तहमा पुग्न निषेध गर्ने गरी कार्यनिधि बनाएर इकाइ, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यसमितिमा युवा पंतीको बर्चश्व कार्यम गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा नै बुढा नेताहरुको आधा होस हवास उडिसक्छ ।
र, यो गठजोडबाट निषेध नै गर्नेगरी नेतृत्वसहित पदाधिकारीमा सहमतिमा छान्नुपर्छ । सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री र ८ सहमहामन्त्री छानेर युवा पुस्तामा नेतृत्व ल्याएपछि मात्रै कांग्रेसले २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट आएको कम्युनिष्टको बर्चश्व तोड्ने रणनीति र कार्ययोजना बनाउन सक्छ ।
तर, यही अवस्थाबाट अगाडी बढ्यो भने कांग्रेसको हातमा हात लाग्ने शुन्य मात्रै हो ।